आफ्नो रिहाइका लागि गृहमन्त्री थापा नै धर्नामा बसेपछि रेशम चौधरीले जेलबाटै निकाले यस्ताे विज्ञप्ति, कसलाई के भने ? — Sanchar Kendra
आफ्नो रिहाइका लागि गृहमन्त्री थापा नै धर्नामा बसेपछि रेशम चौधरीले जेलबाटै निकाले यस्ताे विज्ञप्ति, कसलाई के भने ?
काठमाडौं । निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न माग गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ धर्नामा बसे। चौधरीको रिहाइका लागि धर्नामा बसेका थारु अगुवालाई भेट्‍न बिहीबार माइतीघर मण्डला पुगेका गृहमन्त्री थापा पनि धर्नामा सहभागी भएका हुन् ।
धर्नामा पुगेका गृहमन्त्री थापाले रेशमको रिहाइबारे छलफल गर्न वार्ता टोली बनाएर आउन आग्रह गरेका। थारु कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले भने, ‘माननीय रेशम चौधरीको रिहाइका लागि गृहमन्त्रीज्‍यूले वार्ता टोली बनाएर आउन भन्‍नुभएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेर क्‍याबिनेटमा लैजान्छु भन्‍नुभएको छ ।’
धरानमा गृहमन्त्री बादल पुगेपछि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका जसपाका नेता चौधरीले एक बिज्ञप्ति निकाले । बिज्ञप्ति निकाल्दै पार्टी सरकारमा जाने/नजाने विषयमा आफू बाधक नबन्ने बताएका छन् । सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयबारे पार्टीले निर्णय लिने र आफ्नो त्यसमा सहमति हुने चौधरीले बताएका छन् ।
बिहीबार कारागारबाट एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चौधरीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने बारे जसपा र एमालेबीच वार्ता चलिरहेका बेला आफू त्यसमा असहमत रहेको भन्ने समाचारहरु सार्वजनिक भएको भन्दै त्यसमा सत्यता नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारमा जाने या नजाने विषय पार्टीले टुंग्याउने र पार्टीको निर्णय अवज्ञा गर्नेबारे आफूले कल्पनासम्म नगर्ने बताएका छन् । ‘सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने निर्णय मेरो एकल प्रयासले सम्भव हुने कुरा पनि होइन,’ उनको भनाइ छ,‘त्यो पार्टीको निर्णय होला । पार्टीले गर्ने निर्णयमा बाधक बन्ने कुराको म कल्पनासमेत गर्न सक्दिनँ ।’
जेलमा रहेका चौधरीको रिहाइलाई सर्त बनाएर जसपाले सत्ता गठवन्धनका बारेमा छलफल जारी राख्दा उनको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो । जसपाभित्र ओली सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने दुई धार देखिएको छ ।
पूर्व राजपा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएर सरकारमा जाने पक्षमा छ भने पूर्व संघीय समाजवादी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनको पक्षमा रहेको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा पार्टी सहभागी हुनुभन्दा आफू जेलमा नै बस्न तयार रहेको भन्दै चौधरीलाई उदृत गर्दै सामाचारहरु सार्वजनिक भएपछि बुधबार जसपाका नेता राजेन्द्र महतो बुधबार डिल्लीबजार कारागार पुगेका थिए ।
रेशम चौधरीको मुद्दाबारे के भन्छन् राजकुमार लेखी ? उनकै शब्दमा…
यो विषय सजिलो पनि छ र अप्ठ्यारो पनि छ । टीकापुरका राजवन्दीहरुको रिहाइको विषय राजनीतिक विषय हो र यसलाई राजनीतिकरुपमै समाधान गर्यो भने यो सजिलो विषय हो । तर, यसलाई हत्यासँग जोडेर, अपराधसँग जोडेर दुःख दिने नियतले अल्झाइराखियो भने विषय गम्भीर र जटिल छ । टीकापुरको विद्रोह राजनीतिक विद्रोह थियो ।
टीकापुरको माग राजनीति माग थियो । थरुहट आन्दोलन, मधेस आन्दालन सबै राजनीतिसँग जोडिएका छन् । संघीयता, लोकतन्त्र गणतन्त्र, समावेशी, धर्मनिरपेक्षतासँग जोडिएको हुनाले यसलाई त्यही रुपमा समाधान गर्नुपर्छ । टीकापुर र रेशम चौधरीको विषय अहिले राष्ट्रिय इस्यु बनेको छ । तर, त्यसलाई राज्यबाट जानीजानी अल्झाइएको छ ।
अहिले जुनखालको राजनीतिमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । यसले यति सजिलै पार पाउँछ भने जस्तो लाग्दैन । यो राजनीतिक विषय हो, यो समाधान नभएसम्म राजनीतिले स्थायित्व पाउँदैन । किनभने यसका लागि हामीहरुले मुद्दा उठाइरहन्छौ र त्यो समाधान नभएसम्म अस्थिरता रहिरहन्छ ।
त्यसकारण राजनीति स्थायित्वका लागि मुद्दा समाधान गर्नु आवश्यक छ । यो मुद्दा केवल रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारु होइन र टीकापुरका राजबन्दीसँग मात्र होइन, विप्लवसँग पनि जोडिन्छ । सिके राउत र प्रचण्डसँग पनि जोडिन्छ । बादलसँग पनि जोडिन्छ ।
ह’त्या प्रमाणित भएका कतिपय व्यक्तिहरु रिहाइ हुने, डीआइजी रञ्जन कोइराला जस्ता, विप्लव जस्ता, सिके राउत जस्ता, बालकृष्ण ढुंगेल व्यक्ति पनि अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएका थिए, उहाँहरु रिहा भए । तर, टीकापुर विद्रोहमा लागेकाहरूमाथि झुठा मुद्दा लगाएर जेलमा राखेको छ । त्यसैले अदालतले यसलाई कसरी हेरेको छ, त्यो मुख्य कुरा होइन, सरकारले यसलाई कसरी हेरेको छ र यसलाई सरकारले कसरी सेफल्याण्डिङ्ग गराउँछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
थरूहट र मधेसका धेरैवटा मागमध्ये टीकापुरका राजबन्दीको रिहाइ पनि एउटा माग हो । रेशम चौधरी रिहा भएपछि सबै माग पूरा हुन्छ भने होइन । तर, रेशम चौधरी पनि रिहा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । संविधान संशोधन, झूटा मुद्दाको खारेजी, नागरिकताको विषय, सीमांकन, भाषा लगायतका विषयका साथै टीकापुरका राजबन्दी रिहाइ पनि एउटा माग हो । अन्य मुद्दासँगै त्यो पनि पूरा हुनुपर्छ भनेका छौं हामीले ।
रेशम चौधरीको रिहाइ भयो भने तराई मधेसमा एउटा सकारात्मक सन्देश जान्छ । अन्य मागका बारेमा छलफल गर्न एउटा सकारात्मक वातावरण बन्छ । त्यही भएर रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
रेशम चौधरीको रिहाइको कुरा जसपा नेपालले मात्र होइन, थरूहटसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाका साथै अन्य दलका भातृ संगठन तथा सांसदहरु पनि माग गरिरहेका छन् । उनीहरु सडकमा छन् ।
अस्ति मात्रै एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्रका केही सांसद तथा नेताहरुले रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ । यो मुद्दालाई सत्तासँग जोड्नुहुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई । यो विषय जसपा नेपालको मात्र होइन, यो देशकै राजनीतिक विषय हो । सधैंभरि एउटा व्यक्तिमाथि अन्याय भयो भने त्यसले वातावरण राम्रो बनाउँदैन ।